WestJet na -akwado ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị ọrụ ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » WestJet na -akwado ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị ọrụ ụgbọ elu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu na -arụ ọrụ iji mejuputa iwu ịgba ọgwụ mgbochi nke gọọmentị nyere ndị ọrụ ụgbọ elu nke gọọmentị etiti na -achịkwa ka ọ na -erule ngwụsị Ọktoba.
WestJet nwere ndị ọrụ na -arụ ọrụ ugbu a ihe dị ka 6,000 WestJetters, ebe 4000 ka na -adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na -achị ọchị.
Swoop nwere ndị ọrụ ruru 340 ugbu a, ebe ihe karịrị 170 anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na -achị ọchị.
Otu WestJet ga-agbaso ihe achọrọ maka ndị njem ụlọ ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nwalee nke ọma tupu ọpụpụ.
Ndị otu WestJet nabatara ọkwa nke Minista Ụgbọ njem Omar Alghabra gbasara ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ụgbọ elu nke gọọmentị etiti na -achịkwa.
Minista na -ahụ maka njem bụ Omar Alghabra
Mark Porter kwuru, "Anyị na -aga n'ihu na -abụ onye mmekọ siri ike na mwepụta ọgwụ mgbochi Canada ma na -arụsi ọrụ ike iji mejuputa amụma gọọmentị gbasara ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ụgbọ elu." WestJet Onye isi oche onye isi ala, ndị mmadụ na ọdịbendị. "Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ụzọ kachasị dị irè iji hụ na nchekwa nke ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị, na-egbochi mgbasa nke COVID-19."
Maazị Porter gara n'ihu kwuo, "Anyị ghọtara na ndị anyị ga-enwe ajụjụ, ha na ndị ọrụ anyị na ndị ọrụ anyị ga na-akparịta ụka ozugbo." "Anyị na -achọ nkọwa ndị ọzọ n'aka gọọmentị etiti maka ihe a chọrọ ma kpebisie ike na anyị ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na mmejuputa iwu a ga -eme nke ọma na ngwụcha Ọktoba."
WestJet ugbu a nwere ndị ọrụ na -arụ ọrụ ihe ruru 6,000 WestJetters, ebe 4000 ka na -adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na -achị ọchị. Suo ugbu a nwere ndị ọrụ na -arụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ 340, ebe ihe karịrị 170 ka na -adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na -achị ọchị.
The Otu WestJet ga-agbaso ihe achọrọ maka ndị njem ụlọ ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nwalee nke ọma tupu ọpụpụ. Ndị otu ụgbọ elu na-akwado na nnwale ngwa ngwa-antigen bụ ihe anabatara, nke a na-enweta ma dịkwa ọnụ ala maka ndị njem na-enweghị ọgwụ mgbochi.